I-mut isabisa ngokumisa izitshudeni eziphehla udweshu - Ilanga News
Home Izindaba I-mut isabisa ngokumisa izitshudeni eziphehla udweshu
I-mut isabisa ngokumisa izitshudeni eziphehla udweshu
ZISUSE omunye umbhikisho izitshudeni eMangosuthu University of Technology (MUT).
ZIZUNGEZWA yizembe izitshudeni zaseMangosuthu University of Tec-hnology (MUT), eziseqhulwini
embhikishweni ozama ukuphazami-sa ukufunda nokufundisa kulesi si-khungo esiseMlazi.
NgoLwesihlanu abafundi babhi-kishe bahambisa uhlu lwabo lwezi-khalo kubaphathi besikhungo.
Obambile esihlalweni sokuphatha lesi sikhungo uSolwazi Marcus Ramogale, uthi inyuvesi iphansi phezulu nemizamo yokuthola ama-zambane abolile, okuzothi uma ese-tholakele, bamiswe ngokuphazima kweso labo bafundi kulesi sikhu-ngo.
Uthi kuwumsebenzi walesi sikhu-ngo ukuvikela ukucekelwa phansi kwesakhiwo nokuqinisekisa ukuthi impilo yabantu iphephile odlameni lwabafundi. Uveze ukuthi inyuvesi isezinhlelweni zokufaka isicelo enkantolo sokuvimbela abafundi kulokhu abakwenzayo.
Uthi uma isimo siqhubeka nokuba manzonzo, kuzophoqeleka uku-ba ivalwe inyuvesi, bese izitshudeni zonke zibuyiselwe emakubo, zikhi-shwe nasezindaweni zokuhlala zenyuvesi.
Ngokuthola kweLANGA, kulesi sikhungo nakuba lusetshenziswa uhlelo lwa-online kodwa bayafunda ngaphakathi esikhungweni abafu-ndi ngokushintshana kwamaqoqo.
“Njengamanje yisikhathi sokuthi kube nozinzo, kufundwe. Abafundi mabayeke ukuvumela abanye babo abanezinhloso ezimbi zomhobholo. Yikusasa labo leli abadlala ngalo,” kusho uSolwazi Ramogale.
Izitshudeni zihambise uhlu lwe-zikhalo, zifuna yonke imali yezinsiza kufunda (Learning Materials Allowance) ikhokhwe kuzona ngqo iyisamba kanti inyuvesi ibanika u-50%, bese bephathelwa enye ba-thengelwe ngayo ama-voucher.
I-Student Representative Council (SRC), ithi ifuna u-100% wale mali ukuze bazibonele bona abafundi.
Kule mali yeNational Student Fina-ncial Aid Scheme (NSFAS), isikhu-ngo sibathengela okuningi abafu-ndi okubalwa nama-laptop.
Inyuvesi ithi kayihambisani nesi-phakamiso somkhandlu wabafundi ngoba le mali beyikhishwe ngenxa yohlelo oluqalwe ngemuva kokuqu-buka kweCovid-19 lokufunda online. Ithi kunenqwaba yabafundi evale-leke ngaphandle ohlelweni lukaNSFAS ngenxa yokushoda kwemali.
Ngokwesitatimende senyuvesi, ithi le mali ingakhishwa kubafundi ngokumelelwa yiSRC, uma beyithola le mali bazobe bengasavumelekile ukuyothola ama-laptop, uhlelo lokufunda nokufundisa luzogcina seluhlomulisa abanama-laptop ku-phela, akekho ozosalela emuva ngo-ba ethi akanayo i-laptop.
Ithi inyuvesi isikwazile ukunika abafundi abawu-6 700 imali yabo kanti abalinganiselwa ku-3000 aba-kakhokhelwa ngenxa yesiphithiphithi esenziwe ngabafundi, bevalela izisebenzi amasango ngoLwesihla-nu. Ithi uma kungaphazamisanga lutho, kuzoshaya umhla ka-17 kwe-phezulu sekwenziwe okuningi.
Kwenzeka lokhu nje, kuze kwa-phela amasonto amabili kulwa izi-sebenzi eMangosuthu njengoba iNational Education, Health and Allied Workers (Nehawu) ibifuna kukhushulwe amaholo. Beyifuna u-8% ekubeni inyuvesi ibibeke eta-fuleni u-3.3%.
Kulo mbhikisho kwagcina kuvunyelwene ngo-5.08%. Imali yomhlo-mulo wezindlu nayo ebilwelwa ukuba ikhuphuke ku-R1 500, kuvunyelanwe ngokuthi seyizonyuka ngo-R100 unyaka nonyaka.
Previous articleOwesifazane “uzilengise wafa” esesokeni
Next articleAbesifazane basiconsela amathe iSilo uMisuzulu